Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka oo sheegay in Doorashada Hirshabelle uu u tartami karo muwaadin kasta oo deeggaanka kasoo jeeda – Kalfadhi
Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka oo sheegay in Doorashada Hirshabelle uu u tartami karo muwaadin kasta oo deeggaanka kasoo jeeda
October 8, 2020 Hassan Istiila
Xildhibaanno ka tirsan Golaha Shacabka iyo Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya, kana soo jeeda deegaannada Hirshabelle oo maanta shir-jaariid ku qabtay magaalada Mogadishu, ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee maamulkaasi.
Kulanka ayaa ku saabsanaa ka tashiga xaaladdaha deeggaanka Hirshabelle, gaar ahaan doorashooyinka.
Xildhibaannada oo war-saxaafadeed kasoo saaray shirkooda ayaa ku baaqay in doorashada Hirashabelle ay ku dhacdo wakhtigeeda. Waxaa ay garab-istaag u muujiyeen guddiga farsamada ee xuulista xildhibaannada.
Xildhibaannada ayaa sidoo kale sheegay in muwaadin kasta oo kasoo jeeda Hirshabelle, uu u tartami karo doorashada maamulkaasi.
Gobolka Hiiraan ayaa ku doodaya in Madaxweynenimada maamulkaasi aysan cidna kula tartamin sida ku cad heshiiskii dhismaha maamulkaasi, halka Caasimada maamulkaasina aan laga wareejin karin Magaalada Jowhar.
Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyeeyey geerida Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya
Guddiga Dhaqaalaha iyo Xisaabaadka Baarlamaanka Puntland oo kormeer ku tagay Bangiga Dawladda Puntland